ပြည်ပသတင်း | ဒီပကျော်(နည်းပညာ) | Page 2
Category Archives: ပြည်ပသတင်း
January 20, 2019 dpakyaw	Leaveacomment
Women’s March လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲကို အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက မြို့ ကြီးတွေမှာမနေ့စနေနေ့က ၃ နှစ်မြောက် ကျင်းပခဲ့တာမှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူတွေ တောင်းဆိုကြတဲ့အချက်ထဲမှာ ကျား-မ တန်းတူညီမျှရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အာရုံစိုက်လာစေရေးနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာသူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ အမေရိကန်အိမ်ဖြူတော်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ကျင်းပတဲ့ စုဝေးပွဲမှာတော့ Women’s March လှုပ်ရှားမှုကို သွေးခွဲပြီး ဟန့်တားလို့မရဘူးလို့ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး စီစဉ်ကျင်းပသူလည်းဖြစ်၊ transgender လို့ခေါ်တဲ့လိင်ပြောင်းထားသူတွေရဲ့ အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလည်းဖြစ်တဲ့ Abby Stein က ဆန္ဒပြသူတွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ လူအတော်များများနဲ့ သတင်းဌာနတွေကပါ ဆန္ဒပြသူတွေကို သွေးခွဲနေပေမယ့် ခုလိုလာရောက်စုဝေးတာက ဆန္ဒပြသူတွေကြား မတူခြားနားတဲ့အချက်တွေ ရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ Abby ကပြောပါတယ်။
House of the Lord ဘုရားကျောင်းက ဘုန်းတော်ကြီးLeah Daughtry ကလည်း ဝါရှင်တန်က ဆန္ဒပြသူတွေကို လာရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တာပါ။ နယ်စပ်ကနေ အမေရိကန်ထဲဝင်လာအချိန်မှာ မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေနဲ့ခွဲခံထားရတဲ့ ကလေးတွေ သူတို့မိဘတွေနဲ့ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့အထိ ဆက်ပြီးတောင်းဆိုသွားမယ့်အပြင် ကလေးအားလုံး ပညာသင်ကြားခွင့်ရပြီး၊ လူတိုင်း အခမဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အ၀ရသည်အထိ မရပ်မနား တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ ဘုန်းတော်ကြီးLeah Daughtry က ပြောပါတယ်။
Women’s March ရဲ့ ပထမဆုံးဆန္ဒပြပွဲကိုတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က သမ္မတ Donald Trump ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီးနောက်တနေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
National Women March in Washington DC
Women’s March အမျိုးသမီးထု ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကို တတိယနှစ်အဖြစ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီနဲ့ အခြားမြို့ကြီးတွေမှာ စနေနေ့က ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ကျားမတန်းတူခွင့်ရရေး၊ သန္ဓေသားဖျက်ချမှုဆိုင်ရာ သဘောထား၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မှုတွေနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများ အခွင့်အရေး စတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က တင်ပြထားပါတယ်။
နိုင်ငံတဝှမ်းက အမျိုးသမီးထု ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကို သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့် အိမ်ဖြူတော်မှာ ရုံးစထိုင်ခဲ့ချိန် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလထဲမှာပဲ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် စတင်ခဲ့တာပါ၊ အဲဒီတုန်းက ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ လူသိန်းနဲ့ချီ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ အခု ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ ၁၉ မှာလုပ်တဲ့ တတိယ အကြိမ် အမျိုးသမီးထုချီတက်ပွဲမှာတော့ လူသောင်းဂဏန်းသာရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ အဲဒီလူထုချီတက်ပွဲကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ VOA ဝိုင်းတော်သူ မဆုမွန်ကို မေးမြန်းတဲ့အခါ သူက ခုလိုစပြောပါတယ်။
မဆုမွန်။ ။ အဓိက ကတော့ အမျိုးသမီးထုအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အသားအရောင်မရွေး၊ အသက်အရွယ်မရွေး၊ နောက် လူထုလူတန်းစားမရွေး၊ အားလုံးကနေပြီးတော့ တခြား မြို့တွေ၊ နယ်တွေကနေ စုဝေးပြီးတော့မှ လာပြီးတော့ ချီတက်တောင်းဆို ဆန္ဒပြကြတာပေါ့နော်။ ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူတူ LGBT တွေလည်းပါတယ်။ အဓိကကတော့ အမျိုးသမီးထုအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးတွေအားလုံးက တန်းတူ အခွင့်အရေးရှိရမယ်။ အဲဒီမှာ တချို့အမျိုးသမီးလေးတွေကလည်း ကိုင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ That’s my body. That’s my choise. ဒါ ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သာဖြစ်တယ်၊ ဒါ ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ဒါက ကျမထင်တာကတော့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် တခြားတဘက်မှာလည်း ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထောက်ခံတဲ့သူလည်း ပါနိုင်သလို ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆန့်ကျင်တဲ့သူလည်း ပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အားလုံးရဲ့ တူညီတဲ့အချက်တခုကတော့ အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးအတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်ရှိသင့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးကို သူတို့က အဓိက Highlight လုပ်ပြီးတော့ ပြောချင်တဲ့သဘောလို့ ကျမ နားလည်ပါတယ်ရှင့်။
ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်။ ။ အဲဒီတော့ နောက်တခုက အမေရိကန်နိုင်ငံရေးလောကမှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်း ပိုပြီးတော့ မြင့်မားစေချင်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုရော တွေ့ရသေးလားခင်ဗျ။
မဆုမွန်။ ။ကျမထင်တာတော့ အဓိကက အမျိုးသမီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခွင့်၊ နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ အမျိုးသမီးရဲ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှု၊ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အမျိုးသမီးထုရဲ့အခွင့်အရေးကို အမျိုးသမီးထုကပဲ ကိုယ်ပိုင် တောင်းဆိုခွင့်ရှိမယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ March for all women သူတို့ရဲ့ ဒီနေ့ ပရိုဂရမ်က။ အဲဒါကို ကျမ တွေ့နေရပါတယ်။
ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ လူတွေက ဒီရာသီဥတုအောက်မှာ ဘယ်လို စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ တွေ့ရပါလဲခင်ဗျ။
မဆုမွန်။ ။ ရာသီဥတုက တော်တော်လေးမှကို အေးတယ်၊ အေးတာမှအေးခဲပြီတော့ကို စိမ့်နေတယ်ပေါ့နော်။ ရေခဲမှတ်အောက်လောက်ကို ရောက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက ကလေးလေးတွေလည်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်။ အဖွားကြီးတွေလည်း ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်း ပါတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ဇွဲရှိရှိနဲ့တကယ်ကိုမှ စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပဲ လမ်းလျှောက်နေကြတာ တွေ့တယ်။ နောက်တခုက အဲဒီမှာ ကျမထူးဆန်းတာ နောက်တခုတွေ့ခဲ့တာကျတော့ ဆန္ဒပြတဲ့လမ်းကြောင်းတလျှောက်လုံးကိုလည်း လုံခြုံရေး အပြည့်ယူပေးထားတာကိုတွေ့တယ်။
၂၀၁၉ အမျိုးသမီးချီတက်ပွဲတွေကို နယူးယောက်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ တက္ကဆက်၊ ဖလော်ရီဒါ၊ မီချီဂန်နဲ့ ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်တွေ မှာလည်း ကျင်းပကြပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယား နြူကလီးယားဖျက်သိမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု Trump အကောင်းမြင်
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နြူကလီးယားအစီအစဉ်တွေ အဆုံးသတ်ရေး အမေရိကန်ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေ တိုးတက်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်း သမ္မတ Donald Trump က မနေ့ စနေနေ့ကပြောပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် Kim Yong Chol နဲ့ သောကြာနေ့မှာ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပြီး ဒုတိယ အကြိမ် ထိပ်သီးတွေ့ဆုံပွဲကို လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလ နှောင်းပိုင်း မှာ ကျင်းပမယ့်အကြောင်းနဲ့ စည်းဝေးပွဲလုပ်မယ့်နေရာကိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ကြေငြာ မယ် လို့ သမ္မတ Trump က ဆိုပါတယ်။ Kim Jong Un ရော သူ့ဘက်ကပါ နောက်ထပ် ထိပ်သီးတွေဆုံပွဲ ကျင်းပဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်လို့လည်း သမ္မတ Trump ကသတင်းထောက်တွေကို အိမ်ဖြူတော်မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ Danang မြို့ မှာတွေ့ဆုံဖို့ အလားအလာရှိတယ်လို့ သတင်း ရင်းမြစ်တွေ ကို ကိုးကားပြီး အမေရ်ိကန်သတင်းဌာနတွေက ပြောပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ နြူကလီးယားဆိုင်ရာ အထူးသံ တမန်နဲ့ သမ္မတ Trump တို့ သမ္မအိမ်ဖြူတော် Oval ရုံးခန်းမှာတွေ့ဆုံပြီး ပထမဆုံး ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုတော့ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ နြူကလီးယား အစီအစဉ်တွေ အဆုံးသတ်ရေးအတွက် ရည်ရွယ် ပြုလုပ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲလို့ အိမ်ဖြူတော်က နာမည်ပေးပါတယ်။
ခေါင်းဆောင် Kim Jong Un ရဲ့ ညာလက်ရုံးလို့လည်း တင်စား ခေါ်ဆိုခြင်းခံရတဲ့ အထူး သံတမန်နဲ့ သမ္မတ Trump တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုဟာ မိနစ် ၉၀ လောက် ကြာမြင့်ခဲ့ပါ တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ ထင်မြင်ချက် မပေးလိုကြောင်း ဦးဇော်ဌေးပြော
January 19, 2019 dpakyaw	Leaveacomment
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ AA အဖွဲ့ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ချေမှုန်းဖို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်က မနေ့က ပြောကြားလိုက်တဲ့အပေါ် အစိုးရအနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ ထင်မြင်ချက် မပေးလိုကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက ပြောလိုက်ပါတယ်။
နေပြည်တော်က သတင်းထောက်တွေကို နိုင်ငံတော် သမ္မတ အိမ်တော်မှာ ဒီနေ့ နေ့လယ်က ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး ရှင်းလင်းချက်မှာ အခုလို ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော်က တပ်မတော်စစ်သမိုင်းပြတိုက်မှာ မနေ့က ကျင်းပတဲ့ တပ်မတော် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းထွန်းညီက ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA ကို အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူအဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား ချေမှုန်းဖို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မှာကြားခဲ့ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရအနေနဲ့ အချုပ်ခြာအာဏာနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်၊ အိုးအိမ်၊ စည်းစိမ်တွေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့် တာဝန်ရှိပြီး နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းတွေကို AA သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့က တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက အလေးထားဆောင်ရွက်နေတဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်ကို ထိခိုက်စေတယ်လို့လည်း ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ပြည်သူတွေ လုံခြုံဘေးကင်းရေးကို ထိပါးနှောင့်ယှက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထိရောက်တဲ့ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှု နှိမ်နင်းရေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Donald Trump နဲ့ Kim Jong Un ဖေဖေါ်ဝါရီလကုန်တွေ့မည်
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် Kim Jong Un တို့ ၂ ဦးတို့ရဲ့ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲကို လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာ ပြုလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်က သောကြာနေ့မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ထိပ်သီး စည်းဝေးပွဲနေရာကိုတော့ နောက်ပိုင်းမှာ အသိပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ နြူကလီယား အစီအစဉ်တွေ အဆုံးသတ်ရေးအတွက် ရည်ရွယ် ပြုလုပ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲလို့ အိမ်ဖြူတော်က အမည်ပေးထားတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲ ကျင်းပမယ့်အကြောင်းကိုတော့ မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ထိပ်တန်း နြူကလီးယားဆိုင်ရာ အထူးသံတမန် Kim Yong Chol နဲ့ သမ္မတ Trump တို့ အိမ်ဖြူတော်မှာ တွေ့ဆုံအပြီး ကြေညာလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဟောင်းလည်းဖြစ်သလို၊ ခေါင်းဆောင် Kim Jong Un ရဲ့ ညာလက်ရုံးလို့လည်း တင်စား ခေါ်ဆိုခြင်းခံရတဲ့ အထူးသံတမန်နဲ့ သမ္မတ Trump တို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုဟာ မိနစ် ၉၀ လောက် ကြာလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သမ္မတ Trump အစိုးရအနေနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားအရေးမှာ တိုးတက်မှုတွေရှိလာအောင် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း တွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာ အိမ်ဖြူတော် ပြောခွင့်ရ Sarah Sanders က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
သောကြာနေ့ အစောပိုင်းတုန်းကတော့ မြောက်ကိုရီးယား ကိုယ်စားလှယ် Kim Yong Chol ဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo နဲ့ ဝါရှင်တန် ဒီစီက ဟိုတယ်တခုမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အကျဉ်းကျ အင်ဒိုနီးရှားအစွန်းရောက် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် Abu B. Baker လျှော့ရက်နဲ့လွတ်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ဘာလီဗုံးခွဲသူတွေ နဲ့ တခြားစစ်သွေးကြွတွေ ယုံကြည်လေးစားတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် Abu Bakar Bashir ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အစွန်းရောက် အယူအဆတွေကို စွန့်လွှတ်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဂျိုကိုဝီဒိုဒိုက သူ့ကို ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် ချမှတ်ထားတာကိုလျှော့ပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ သူရဲ့ရှေ့နေတွေက ဒီကနေ့မှာ အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အစိုးရအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ဘာသာရေးကင်းလွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆအပေါ်မှာ သူဘက်က လက်ခံဖို့ ငြင်းဆန်နေတာကြောင့် သူ့ကို အရင်ကတော့ ပြစ်ဒဏ်ကနေ လွှတ်ပေးလို့ မရခဲ့ပါဘူး။ Abu Bakar Bashir က သူသာလျှင် ဘုရားသခင် နဲ့ ပြန်လည် ဖြေဆိုနိုင်တဲ့သူ တဦးတည်းဖြစ်ပြီး၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း အစ္စလာမ်မစ်ဥပဒေ နဲ့ အုပ်ချုပ်သင့်တယ်လို့ အခိုင်အမာ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ လာမယ့် ဧပြီလမှာကျင်းပမယ့် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးတာတွေ လုပ်လာနေချိန်မှာပဲ အခုလိုမျိုး သူ့ကို လွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတဝီဒိုဒိုနဲ့ အပြိုင် ရွေးချယ်ခံမယ့် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေက Bashir ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်စစ်စစ် မဟုတ်ဘူးလို့ သိက္ခာချ တိုက်ခိုက် ပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ သမ္မတဝီဒိုဒိုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး အကြံပေးဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေ Yusril Mahendra ကတော့ သူ့အနေနဲ့ Bashir ကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ထားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတ ဝီဒိုဒိုဆီကို တင်ပြခဲ့တယ်လို့ ဒီကနေ့ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မက္ကဆီကိုအလယ်ပိုင်း ရေနံပိုက်လိုင်း ပေါက်ကွဲမှု လူ ၂၀ သေဆုံး
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာ သောကြာနေ့တုန်းက ယိုစိမ့်နေတဲ့ ရေနံပိုက်လိုင်းပေါက်ကွဲခဲ့ တာကြောင့် လူ ၂၀ သေဆုံးပြီး ၆၀ ထက်မနည်း ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရသွားခဲ့ပါတယ်။
Hidalgo ပြည်နယ်က ရေနံပိုက်လိုင်းကနေ ရေနံတွေကို တရားမဝင်ခိုးယူနေတဲ့ သူတွေကြောင့် ပိုက်လိုင်း ယို စိမ့်တာနဲ့ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ မက္ကဆီကို အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွား ခင်မှာ ရေနံဆီတွေ လေထဲကို ပန်းထွက်သွားပြီးတော့ လူတွေက အဲဒီရေနံဆီတွေကို ရေပုံးတွေ၊ အမှိုက်ပုံးတွေနဲ့ တခြား ပုံးတွေနဲ့ လိုက်ခံနေကြတယ်လို့ ဗွီဒီယိုတွေမှာ ပြနေပါတယ်။
Hidalgo ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Omar Fayad ကတော့ အဲဒီမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ ရေနံခိုးယူမှု မှာ မပါဝင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး ဒီလိုခိုးယူတာတွေဟာ တရားမဝင်တဲ့အပြင် ကိုယ်ရဲ့အသက်ကိုရော၊ မိသားစုအတွက်ပါ အန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မက္ကဆီကိုသမ္မတ Andres Manuel Lopez Obrador ကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာက လူတွေကို အကူအညီတွေပေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ လောင်စာဆီခိုးယူမှုတွေကြောင့် မက္ကဆီကိုအစိုးရအနေနဲ့ တနှစ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံလောက်ဆုံးရှုံးရတယ်လို့လည်း အစိုးရက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကန်အစိုးရအသုံးစရိတ်နဲ့ နယ်စပ်လုံခြုံရေးရန်ပုံငွေကိစ္စ သမ္မတထရမ့် မိန့်ခွန်းပြောမည်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အစိုးရယန္တရားတစိတ်တပိုင်း ရပ်ထားရတဲ့ကိစ္စနဲ့ နယ်စပ်လုံခြုံရေးကိစ္စတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီကနေ့ စနေနေ့မှာ အရေးကြီးတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်မယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump က ပြောပါတယ်။
ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီမှာ အိမ်ဖြူတော်ကနေ သမ္မတ Trump မိန့်ခွန်းပြောမှာဖြစ်ပြီး သူ့အဆို တောင်ပိုင်းနယ်စပ်က လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားမယ်၊ တောင်ပိုင်း နယ်စပ်ကို လုံခြုံအောင်မထားနိုင်ဘူးဆိုရင် တို့တွေဟာ သိပ်ကိုဉာဏ်နည်းတဲ့ သနားစရာသတ္တဝါတွေပဲလို့ သမ္မတက ပြောပါတယ်။
အရီဇိုးနားပြည်နယ် သဲကန္တာရမှာ တဘက်နိုင်ငံက တရားမဝင်လာရောက်သူ ၃၇၆ ဦး အမေရိကန်နယ်စပ် ဂိတ်ကို ခြေလျင်ခရီးနဲ့ရောက်လာပြီး အဲဒီမှာ နယ်စပ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ တန်းစီနေကြတဲ့ ဗွီဒီယို ၂ ခုကို Twitter လူမှု ကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ တင်လိုက်ပါတယ်။ သူတို့တွေ အားလုံးနီးပါးက မိသားစုလိုက်လာကြတာတွေ၊ လူကြီး မပါတဲ့ အသက်မပြည့်ကလေးတွေ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ရေးထားပါတယ်။
ဒီမိုကရက်နဲ့ ရီပတ်ပလစ်ကန် ပါတီတို့အကြား ဒီနယ်စပ်တံတိုင်းကာရေးကိစ္စ သဘောတူညီချက်မရလို့ အမေရိကန်အစိုးရလုပ်ငန်းတချို့ ရပ်နားထားရတာ စနေနေ့မှာ ၂၉ ရက် ပြည့်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတက တံတိုင်းဆောက်ရေး ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ငါးထောင့်ခုနှစ်ရာ တောင်းထားပြီး ဒီမိုကရက်တို့ကတော့ နယ်စပ်လုံခြုံရေးအတွက် ဒေါ်လာသန်း တထောင်ပေးမယ်လို့ပဲ ပြောထားတာပါ။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာ ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်းအနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခံရ
January 18, 2019 dpakyaw	Leaveacomment
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကလေးမွေးကြဖို့ အစိုးရက တိုက်တွန်းနေပေမယ့် ကမ္ဘာမှာ ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်း အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံတခုအဖြစ် ဆက်လက်ရှိနေပါတယ်။
အာရှမှာ စတုတ္ထစီးပွားရေးအင်အား အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ကလေးမွေးနှုန်း ပုံမှန် ဖြစ်အောင် အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့သက်တမ်းမှာ အနည်းဆုံး ကလေး ၂ ယောက်လောက် မွေးကြအောင် ရည်မှန်းထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၈ တတိယလေးလပတ်မှာ ကလေးတယောက်နှုန်းတောင် မမွေးကြဘူးလို့ လူဦးရေစာရင်းကောက်ခံတဲ့ပညာရှင်တွေက ပြောပါတယ်။ အခုနှုန်းဟာ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းကဆိုရင် စံချိန်တက် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ အတော်လေးစိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လို့ Seoul မြို့တော်က အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ Dr. Jung Jae-hoon ကပြောပါတယ်။
တခြား OECD နိုင်ငံတွေရဲ့ မွေးဖွားနှုန်းနဲ့ယှဉ်ရင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်မှာ မွေးဖွား နှုန်းက ၁ ယောက်ကျော်လောက်နည်းနေတယ်လို့ ပါမောက္ခ Jung ကပြောပါတယ်။ ကလေးစရိတ်ကြီးမြင့်တာ၊ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းထားဖို့ အခက်အခဲရှိတာ၊ အလုပ်ချိန်တွေများတာ စတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ ကလေးသိပ်မမွေးကြတော့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးမွေးဖွားနှုန်းတက်လာအောင် တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၁၂၁ ဘီလီယံ သုံးစွဲခဲ့ပေမဲ့ အောင်မြင်ပုံမရပါဘူး။ ဒီနှုန်းနဲ့ဆိုရင် တောင်ကိုရီးယား လူဦးရေဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ စတင် ကျဆင်းလိမ့်မယ်လို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
ရုရှားနဲ့ပတ်သက်မှု လွှတ်တော်မှာလိမ်လည်ထွက်ဆိုဖို့ သမ္မတထရမ့်ညွှန်ကြားခဲ့ဟု သူ့ရှေ့နေ Cohen ဆို
ရုရှားနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့တော်မှာ Trump Tower အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တာတွေကို လွှတ်တော်မှာ လိမ်လည်ထွက်ဆိုဖို့ သမ္မတ Donald Trump က သူ့ရှေ့နေကို ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
သမ္မတနဲ့ သူ့ရဲ့ရှေ့နေဟောင်း Michael Cohen တို့အကြောင်း ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်း ကိုတော့ အမည်မဖော် လိုတဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အရာရှိ ၂ ဦးကို ကိုးကားပြီး BuzzFeed သတင်းဌာနက မနေ့ နှောင်းပိုင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ရုရှားနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို လွှတ်တော်မှာ လိမ်လည်ထွက်ဆိုဖို့ သမ္မတက ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး Robert Mueller ကို ရှေ့နေ Cohen က ပြောခဲ့တယ် လို့လည်း ကိုးကား ရေးသားထားပါတယ်။
သတင်းမှာကိုးကားဖော်ပြခဲ့သူ လုံခြုံရေးအရာရှိ ၂ ဦးဟာ အမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရာမှာ ပါဝင်သူတွေ ဖြစ်ကြောင်း လည်း သတင်းက ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ Trump နဲ့အတူ ဆောက် လုပ်ရေး စီမံကိန်းကို ကြီးကြပ်ဖို့ တာဝန်ပေးထားတဲ့ သမီး Ivanka နဲ့ သားဖြစ်သူ Donald, Jr. တို့ကိုလည်း ရှေ့နေ Cohen က အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ အသေးစိတ်ကို ပုံမှန်အစီရင်ခံခဲ့ရတယ်လို့လည်း သတင်းကရေးပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ ရုရှားနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းနေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း ရှေ့နေ Cohen က အစီရင်ခံရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ သမ္မတ Trump ကတော့ ရုရှားနဲ့ အပေးအယူလုပ်တာ ဘာတခုမှမရှိတဲ့အကြောင်း ပြော ဆိုထားတာပါ။ ရုရှားနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့တာတွေကို လွှတ်တော်ရေးရာ ကော်မတီ ရှေ့မှောက် မှာ လိမ်လည် ဖုံးဖိဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ဟာ အကြီးမားဆုံး စွပ်စွဲချက်တခု ဖြစ်တဲ့အတွက် မှန်-မမှန်ဆိုတာ ဖော်ထုတ်နိုင်အောင် လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း အောက်လွှတ်တော် ထောက်လှမ်းရေး ကော်မတီဝင် ဒီမိုကရက်အမတ် Adam Schiff က Twitter လူမှုကွန်ရက်ကနေ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တက္ကဆက်ပြည်နယ် ကိုယ်စားပြု အောက်လွှတ်တော်အမတ် Joaquin Castro ကလည်း သတင်းမှာ ဖော်ပြတဲ့ အတိုင်းသာ မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သမ္မတ Trump ရာထူးက နုတ်ထွက် ဖို့နဲ့ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ အရေးယူခံရမှာ ဖြစ်ကြောင်း Twitter လူမှုကွန်ရက်ကနေ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာ ကြာသပတေးနေ့က ရဲသင်တန်းကျောင်းတခုမှာ ပစ်ကပ်ထရပ်ကားနဲ့ အသေခံကားဗုံးဖေါက်ခွဲမှုတခု ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့အတွက် အနဲဆုံး ၁၀ ဦးသေဆုံးပြီး ၅၄ ဦးထက်မနည်း ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းမှာ ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ သွားနေတဲ့ သမ္မတ Ivan Duque ကတော့ဆွေးနွေးပွဲကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး ဘိုဂိုတာနားက ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွါးရာနေရာကို အမြန် သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အခုလို တိုက်ခိုက်မှုဟာ ငယ်ရွယ်ရဲ့ လုံခြုံရေးတပ်သားတွေ ဒါမှမဟုတ် ရဲတွေကို တိုက်ခိုက်တာတင် မကပဲ ကိုလံဘီယာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ကိုပါ တိုက်ခိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ကပြောကြားခဲ့ပြီး အခုလို ဆိုးဝါးတဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် အတွက် အရေးယူမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
လက်တင်အမေရိက ဒေသဆိုင်ရာ အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Kimberley Breier ကလည်း အခု တိုက်ခိုက်မှုကို ရှုံ့ချလိုက်ပြီး သေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဝမ်းနဲကြေကွဲရပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
လက်နက်အပြည့်အစုံပါတဲ့ရဲတွေ၊ အနံ့ခံခွေးတွေနဲ့ လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့် ကင်မရာတွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ရဲသင်တန်းကျောင်း တောင်ဘက် ဂိတ်ကနေ ဗုံးပါတဲ့ ပစ်ကပ် ထရပ်ကားက ဖြတ်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားသမား ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကို ကိုလံဘီယာအစိုးရှေ့နေတွေ ခုထိ မဖေါ်ထုတ်နိုင်သေးသလို ဘယ်အဖွဲ့အစည်းက တိုက်ခိုက်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ခုထိ မကြေညာသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဒေသမှာ ELN သူပုန်အဖွဲ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ တိုးလာနေတာပါ။